Umphakathi Uyinkinga, Hhayi Abezindaba | Martech Zone
NgoMsombuluko, Julayi 1, 2013 Douglas Karr
Izolo, ngizwe indaba emnandi ngabangane nezitha. Indaba ibimayelana nokuthi kunzima kanjani ukwenza umngani kunesitha. Isitha singenziwa ngendaba yezikhathi, kepha imvamisa ubungani bethu buthathe izinyanga noma iminyaka ukudala. Njengoba ubheka ezinkundleni zokuxhumana, lokhu kubuye kube yinkinga… wena noma ibhizinisi lakho ungenza into elula njengokuthumela i-tweet embi bese i-Intanethi iqhuma ngenzondo. Izitha ziyindlala.
Ngasikhathi sinye, isu lakho lokunikeza abathengi indlela yokuthola impendulo nokunikeza inani kubo kungathatha izinyanga, noma ngisho neminyaka, ngaphambi kokuba umthengi abonge inani negunya emizamweni yakho yezokuxhumana. Eqinisweni, imizamo yakho kungenzeka ingakhuli ibe ubungani online njengoba unethemba.
Kunzima kakhulu ukwenza umngane kunesitha.
Indaba yayingeyona yokuba ku-inthanethi… empeleni yayivela endimeni yeBhayibheli. Angikusho lokho ukukhuthaza noma imuphi umbono, ukukhomba nje ukuthi le nkinga ayiqalanga ngemithombo yezokuxhumana. Inkinga iphathelene nokuziphatha komuntu, hhayi nganoma iyiphi indlela yokuxhumana nomphakathi. Imithombo yezokuxhumana imane inikeze isithangami somphakathi lapho sibona lezi zinkinga zilethwa ekukhanyeni.
Njengoba ngibuka ama-Interwebs ehlasela osaziwayo abaningi, osopolitiki kanye nezinkampani, empeleni ngiyazibuza ukuthi amasu ezokuxhumana nabantu asebenzayo azobukeka kanjani ngokuzayo. Izifundiswa ezizibiza ngokushumayela zisobala futhi zifuna ukuthi abantu, abaholi nezinkampani esizilandelayo zitholakale ku-inthanethi… bese siyazishaya phezu kwekhanda lapho zenza iphutha. Ngabe izinzuzo zizoqhubeka nokudlula izindleko?
Hhayi… empilweni siphinde senze izitha kalula… kepha akusivimbi ekutshaleni isikhathi sokwenza nokugcina ubungani obuhle buphila. Kungaba lula ukwenza isitha kunomngani, kepha izinzuzo zobungane zidlula kakhulu noma iyiphi ingozi yokwakha isitha.
Ukuphepha Nokuvikeleka kwe-WordPress
Jul 1, 2013 ku-9: 45 AM
Isihloko esithandekayo kepha i-athikili ayinikezeli noma iyiphi i-hypothesis njengesisombululo. Ukusaphakamisa lolu daba kuhle ngokwakho. Tnx
Jul 1, 2013 ku-11: 20 AM
Anginaso isixazululo - kepha ngilangazelela ukubona ukuthi izinkampani ziwalungisa kanjani amasu ezokuxhumana nabantu noma ukuthi abathengi basabela kanjani emaphutheni ezinkundla zokuxhumana njengoba isikhathi siqhubeka.